Tenisy ambony latabatra – «Open de Tana» : hiofana any Frantsa i Luciano sy i Niantsa | NewsMada
Tenisy ambony latabatra – «Open de Tana» : hiofana any Frantsa i Luciano sy i Niantsa
Fahombiazana ny andiany fahatelo tamin’ny “Open de Tana”, taranja tenisy ambony latabatra. Tsara ny fikarakarana, nahafinaritra ny fifaninanana, afa-po ireo mpilalao. Nisongadina ho an’ny U16 i Luciano sy i Niantsa.
Tontosa, ny asabotsy lasa teo teny amin’ny kianja mitafon’ny ANS Ampefiloha, ny andiany fahatelo amin’ny “Open de Tana”, taranja tenisy ambony latabatra, nokarakarain’ny seksiona Antananarivo Renivohitra. Lasan’i Niantsa, mpilalaon’ny CFTT Aro, ny teo amin’ny vehivavy sy i Luciano, avy any Moramanga, ho an’ny lehilahy ny tapakila hiatrehana fiofanana any amin’ny Club CSM Puteaux Frantsa, sokajy U16. Nanolotra izany, ho azy mianadahy, i Rassaint Thierry (Toanina), anisan’ireo tomponandraikitra ao amin’ny Club CSM.
Raha hiverenana ny vokatra, resin’i Niantsa teo amin’ny famaranana, tamin’ny seta 4 no ho 0, i Harena avy amin’ny Asa. Lasan’i Niantsa avokoa ny “Open” miisa telo, tamin’ity. Lavon’i Luciano, tamin’ny seta 4 no ho 0, kosa indray i Angelo, avy amin’ny CFTT Aro. “Open” roa amin’ny telo no lasany, tamin’ity. Nahatratra 80 mianadahy ny isan’ireo mpifaninana, avy amin’Analamanga, Alaotra Mangoro, Matsiatra Ambony ary Atsinanana.
Ankoatra izay, norombahin’i Sitraka (Galaxy), teo amin’ny “senior” lehilahy sy i Fanantenana (Asa), ho an’ny vehivavy ny lelavola 280.000 Ar.
“1ère série” Lehilahy : Sitraka (Galaxy) – Tomasy (MFB) : 4 / 0
“1ère / 2è série” Vehivavy : Fanantenana (Asa) – Hanitra (Arics) : 4 / 1
“2è / 3è série” Lehilahy : Miora (Asut) – Tambantsoa (Asut) : 4 / 2
“Non licencié” Lehilahy : Rivo (MFB) – Haja (CFTT Aro) : 4 / 0
“Non licencié Vehivavy” : Hanta (MFB) – Vero (CFTT Aro) : 4 / 0
“U16 Vehivavy” : Niantsa (CFTT Aro) – Harena (Asa) : 4 / 0
“U16 Lehilahy” : Luciano (Moramanga) – Angelo (CFTT Aro) : 4 / 0